Boliska dalka Canada oo badi-goobayo Gacan-ku-dhiigle Somali-Canadian ah oo dil geystay – idalenews.com
Boliska magaalladda Edmonton, ayaa waxaa amar lagu siiyey inay soo xiraan Nin Somali-Canadian ah, kaasi oo la sheegay inuu dabayaaqadii sannadkii hore dilay nin kale oo ka mid ah Jaalliyadda Soomaalida ku nool dalkaasi.
Khamiistii la soo dhaafay ayaa lagu dhawaaqay soo-qabashadda Gacan-ku-dhiiglaha oo magaciisa lagu sheegay Hassan Isse Ismail oo 29-jir ah, kaasi oo ku eedeysan inuu bishii November 19-dii ee sannadkii hore uu dilay Marxuum Aden Ahmed oo 24-jir ah.
Gacn-ku-dhiiglaha waxa uu dhowr jeer si arxan-darro ah Toorey ugu dooxay Marxuumka, oo isagu dhaawac ah ku geeriyooday Isbitaalka.
Dilkaasi ayaa yimid kadib, markii ay dhowr i nin oo ka mid ah Soomaalida haysata Dhalashadda dalka Canada ay ku dgalameen gudaha Guri ku yaalla magaalladda Edmonton.
Hadal ka soo baxay Boliska ayay ku sheegeen inaysan rumeysnyn inuu dilkaasi salka ku hayo muran dhinaca Daroogadda ah.
Boliska waxay rumeysan yihiin inay suurtogal tahay inuu ku dhuumalaysnayo Deegaanka ku meeraysan magaalladda Toronto, waxayna ka digeen inuu Gacan-ku-dhiiglahasi khatar yahay, isla markaana uu hubeysan yahay.
Gacan-ku-dhiiglaha ayaa waxa lagu soo oogi doonaa Fal-dembiyeedka Heerka Labaad iyo inuu haystay hub sharci-darro ah.
Gacan-ku-dhiiglaha ayaa waxa uu horey u soo dhamaystay Xabsi muddo afar sanno, kadib, markii uu nin ku dhex tooreeyey Bas ka dhex shaqeeya magaalladda Ottawa bishii September sannadkii 2008-dii.
Madaxa Golaha Soomaalida-Kanada “The Canadian-Somali Congress” Ahmed Hussien ayaa sheegay in Amarka Boliska ee soo-qabashadda Gacan-ku-dhiiglaha ku timid iskaashiga u dhexeeya Boliska Edmonton iyo Jaalliyadda Soomaalida ku dhaqan Alberto.
“Waxaan qabnay hawl badan sannadihii 2011 ilaa 2012, laakiin miraha dadaalkaasi ayaan haatan arkaynaa, waana war wanaagsan’ ayuu yiri Ahmed Hussien
Tan iyo sannadkii 2008-dii In ka badan 30 qof oo rag ah oo ka tirsan Soomaalida Kanadiyaanka ayaa lagu dilay iska horimadyo ka dhacay Alberto, iyadoo ku-dhawaad kala-bar dadkaasi lagu dilay Edmonton.
Gabdhaha Heegan oo ku guuleystay Horyaalkii 4aad ee Kubadda Gacanta + Sawirro